Senior Sales Executive (Best Western China Town Hotel) ﻿
16.4.2021, Full time , Hospitality / Hotel
Company: Best Western Green Hill Hotel
With customers at the forefront of our minds,The Company prioritizes for the best of customer service at value price point for our guests with uncompromising quality and facilities.Starting from Distribution Business, Construction and Kone Myint Thar Restaurant in 1993, the company has expanded into Hospitality Industry and Real Estate sector in Yangon.
•	Customer Service ကိုနားလည်ကျွမ်းကျင်သူကိုဦးစားပေးမည်။
•	ဟိုတယ်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၃)နှစ်ရှိရမည်။
•	Corporate Market အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
•	English Language ကို Excellent Verbal and Written Communications Skill ရှိရမည်။
Work location No.127 – 137, Anawrahta Road, Corner of Lanmadaw street, Latha Township, Yangon.
•	Daily Sale Report များအား အချိန်မှီစီစဉ်တင်ပြနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Hygiene & Safety ကို နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည် ။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့် စည်းလုံးညီညွှတ်စွာ လပ်ုကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	New Item များကု အဆင့်မြှင့်ိဖန်တီးတီထွင်တတ်ြပီး အချိန်နှင့ တပြေးညီဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့ ကို စည်းကမ်းနှင့်အညီထမ်ိသိမ်းဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Senior Sales Executive (Best Western China Town Hotel) Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Best Western Green Hill Hotel Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Hospitality / Hotel Jobs in Myanmar, jobs in Yangon